किशोर-किशोरीहरूले जान्नैपर्ने विषय- महिनावारी - DURBAR TIMES
HomeHealthकिशोर-किशोरीहरूले जान्नैपर्ने विषय- महिनावारी
किशोर-किशोरीहरूले जान्नैपर्ने विषय- महिनावारी
रजस्वला/महिनावारी(पिरियड) महिलाहरुमा गर्भाशयबाट निस्किएको रगत योनीको माध्यमबाट बाहिरिने प्रकृया हो । शारीरिक परिवर्तन र विकासक्रमको अन्त नजिकै पुगेकी छिन् भन्ने संकेत हो ।
पिरियड्सको बारेमा सिक्नु र बुझ्नु पर्ने कुराहरु धेरै छन् तर यहाँ किशोर-किशोरीहरूले गरेका केहि सामान्य प्रश्न\_जिग्यासाहरु छन् जुन प्राय किशोरीहरूले जिग्यासाहरु राखेका छन् जस्का उत्तर टिन्स स्वास्थ्य पत्रीकाद्वारा डा. कृष्ण ऊडको सहकार्यमा तयार पारिएको छ।
केटीहरु प्राय जसो कुन समय वा वर्षमा रजस्वला/महिनावारी हुन्छन् ?
प्राय जसो केटीहरू १२ वर्षको आसपासमा पहिलो पटक रजस्वला हुन्छन्। प्रत्येक महिलाको शरीरको विकास हुने आफ्नै समय हुन्छ। तर १० र १५को बिचमा जुनसुकै समयमा पहिलो रजस्वला हुनुलाई ठीक मानिन्छ।
एउटी महिलाको पिरियड हुनको लागि सही उमेर छैन\_ यो उमेरमा पिरियड हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न तर केहि संकेतहरू छन् जुन चाँडै सुरु हुन्छ र जसको साहेताले हामी यो आकलन लाउन सक्छौ कि उनी अब पिरियड हुने चरणमा पुगेकी छिन् ।
प्राय जसो महिलामा स्तन विकास हुन सुरु गरेको २ बर्ष पछि उनको रजस्वला हुन्छ।
अर्को संकेत भनेको योनी डिस्चार्ज फ्लुईड (एक प्रकारको सिगान जस्तै\_mucus) हो जुन युवतीले उनको कपडा भित्र देख्न वा महसुस गर्न सक्छन्। यो डिस्चार्ज सामान्यतया करीव ६ महिना देखि एक बर्ष अगाडि केटीको पहिलो पिरियड हुनु अघि शुरू हुन्छ।
पिरियड के कारण हुन्छ?
पिरियड शरीरमा हर्मोन परिवर्तनको कारण हुन्छ। हर्मोनहरू रासायनिक सन्देशवाहक हुन्। अण्डाशयहरूले महिला हार्मोन एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन रिलिज गर्छन्। यी हार्मोनहरूले गर्भाशय (वा गर्भ)मा अस्तर\_lining बनाउँछ। निर्मित अस्तर एक उर्वर अण्डालाई जोड्नको लागि र विकास गर्न सुरू गर्नको लागी तयार हुन्छ। यदि त्यहाँ कुनै उर्वर अण्डा छैन भने, अस्तर च्यातिन्छ र रक्तस्राव हुन्छ। यही प्रक्रिया फेरि फेरी दोहोरी रहन्छ। अस्तर बन्नको लागि प्रायः एक महिना लाग्छ, त्यसपछि अस्तर च्यातिन्छ र यही कारणले महिलाहरूमा रजस्वला महिनामा एकचोटी हुन्छ यसै कारणले यो प्रकृयालाई महिनावारी पनि भन्ने गरिन्छ।
महिनावारी नहुदा र भइसकेपछि
कसरी Ovulation\_ओव्यूलेशन पिरियडमा सम्बन्धित छ?
ओव्यूलेशन भनेको अंडाशयबाट\_डिम्बशय अण्डा निकाल्ने हो। उहि हर्मोनहरू जसले गर्भाशयको अस्तरको निर्माण गर्दछ यसले पनि अण्डाशयको अण्डाहरूलाई छोड्न लगाउछ। अण्डा पातलो ट्यूबको माध्यमबाट गर्भाशयमा पुग्छ त्यस ट्यूबलाई फलोपियन ट्यूब भनिन्छ।
यदि अण्डालाई शुक्राणु कोशिका\_sperm cellद्वारा निषेचित\_attaches भएको छ भने, यो गर्भाशयको भित्तामा जोडिन्छ, जहाँ समयको साथ यो बच्चामा परीणत हुन्छ। यदि अण्डा निषेचित भएको छैन भने, गर्भाशयको अस्तर बिग्रिन्छ र ब्लीड हुन्छ, पिरियड हुन्छ।
के पिरियड नियमित रूपमा हुन्छ जब Menstruation\_क्षेत्रमिति शुरू हुन्छ?
पिरियड सुरू भएपछी केहि वर्ष केटी\_महिलाको पिरियड नियमित रूपमा हुँदैन। यो सुरुमा सामान्य हो तर उनको पहिलो पिरियडको करीव २-३ बर्ष पछि पिरियड प्रत्येक ४-५ हप्तामा एक पटक हुन्छ।
के आफ्नो पीरियड सुरु हुने बित्तिकै केटी गर्भवती हुन सक्छीन्?
हो, एक युवती उनको पिरियड शुरू हुने बित्तिकै गर्भवती हुन सक्छीन्। एउटी युवती आफ्नो पहिलो पिरियड भन्दा पहिले पनि गर्भवती हुन सक्छीन् किनभने उसको हार्मोनहरू पहिले नै सक्रिय हुन सक्छन्। हर्मोनहरूले ओभुलेशन र गर्भाशय भित्ताको निर्माण गरेको हुन सक्छ। एक केटी जो कहिले पिरियड भएकी छैनन् यदि उनले यौन सम्बन्ध रखिन् भने उनी पनि गर्भवती हुन सक्छीन्।
पिरियड कति लामो हुन्छ?
पिरियड प्रायः ५ दिन सम्म हुन्छ तर छोटो वा लामो लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ।
पिरियड प्राय कती समयमा हुन्छ?
पिरियड प्राय: प्रत्येक ४-५ हप्तामा एक पटक हुन्छ। तर कुनै केटीहरू यो अवधि भन्दा केही अगाडि वा केही पछाडि पनि हुनसक्छन्।
के मैले प्याड, ट्याम्पन, वा Menstrual cup प्रयोग गर्नुपर्दछ?
पीरियडको रगतसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने बारे धेरै विकल्पहरू हुन्छन्। आफुलाई कुन सजिलो हुन्छःभनेर थाहापाउन तपाईले सबै एकपटक प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ। केही युवतीहरू केवल एक विधि प्रयोग गर्दछन् र अरू बिभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्छन्।
अधिकांश युवतीहरू आफ्नो पहिलो महिनावारीमा प्याड प्रयोग गर्छन् । प्याड कपासले बनेको हुन्छ र विभिन्न आकार हुन्छन । प्याडमा टाँसिएको स्ट्रिपहरू हुन्छन् जुन भित्रिवस्त्रसँग टासिन्छन्।
धेरै केटीहरूले प्याडहरू भन्दा टेम्पन बढी सुविधाजनक महसुस् गर्छन, विशेष गरी खेल खेल्दा वा पौडी खेल्दा यसले निकै सजिलो अनुभब गराउछ । टेम्पन एक कपास प्लग हो जुन केटीले उनको योनीमा राख्छन् । धेरैजसो टेम्पन एक एप्लिकेटरको साथ आउँछ, एप्लिकेटरले ट्याम्पनलाई सहि स्थानमा बस्न मद्धत गर्छ । टेम्पनले महिनावारी हुदाको रगत समाहित गर्छ। ट्याम्पनलाई हामीले ८ घण्टा भन्दा बाढी राख्न हुन्न किनकि यसले गम्भीर संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ जसलाई ‘toxic shock syndrome’ भनिन्छ।
केही किशोरीहरूलाई भने Menstrual cup मन पर्छ। अधिकांश Menstrual cup सिलिकॉनले बनेको हुन्छ।
Menstrual cup कसरि प्रयोग गरिन्छ ?
यसलाई योनी भित्र हाल्नपर्छ र यसले रगतलाई होल्ड गरेर राख्छ जब सम्म हामीले Menstrual cup झिक्दैनौ ।
कति रगत बग्छ या बाहिर आउँछ ?
बाहिर आएको रगत धेरै रगत जस्तो देखिन सक्छ, तर केटीले सामान्यतया महिनावारीमा एक डाडु(tablespoons) जति रगत बग्छ पुरै महिनावारीको अवधिभर । प्राय जसो केटीहरूले दिनमा आफ्नो प्याड, ट्याम्पन, वा Menstrual cup ३-६ पटकसम्म परिवर्तन गर्नुपर्दछ।
के महिनावारी बाँकी जीवनभर हुनेछ ?
जब महिला लगभग ५०-५५ वर्षको उमेरमा पुग्छन् तब महिनावारी पूर्ण रूपमा रोकिन्छ। महिलाहरु गर्भवती हुँदा पनि महिनावारी हुदैनन् ।
पीएमएस (प्रिमेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम)(PMS) के हो ?
पीएमएस भनेको महिनावारी हुनुभन्दा अगाडी युवतीमा हुने भावनात्मक र शारीरिक लक्षणहरु हुन् । यसको लक्षणहरूमा मनको अवस्था, उदासी, चिन्ता, फ्लोटिंग पनि हुन्। महिनावारी सकिएको केहि नदिन पछि यो लक्क्षणहरु आफै जानेछन् ।
ऐंठन(बाउंडिने काम, दुखाइ) भएमा के गर्न सकिन्छ ?
धेरै महिलालाई उनिहरुको महिनावारीको पहिलो केहि दिन ऐंठन हुन्छ । यदि ऐंठनले तपाईंलाई दु: ख दिन्छ भने, तपाईं तल दिएको कुरा गर्न सक्नुहुनेछ :
तपाईको पेटमा न्यानो तातो प्याडले सेक्नुहोस्
आइबुप्रोफेन (एडभिल, मोट्रिन, वा स्टोर ब्रान्ड) वा नेप्रोक्सेन (एलेभ वा स्टोर ब्रान्ड) पनि लिन सक्नुहुन्छ
के महिनावारीको कुनै समस्याहरूको लागि के गर्नपर्छ ?
धेरैजसो केटीहरूलाई उनीहरूको महिनावारीसँग कुनै समस्या हुँदैन। तर यदी तल दिएको कुरा छ भने डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस्:
यदी तपाई १५ वर्ष वा बढि हो तर तपाईंको महिनावरी सुरू भएको छैन
यदी तपाईको महिनावारी भएको २ बर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर अझै पनी १-१ महिनामा नियमित रुपमा महिनावारी हुन्न
यदी पीरियडहरू बीचमा रक्तस्राव हुन्छ
ऐंठन हुन्छ जुन आइबप्रोफेन वा नेप्रोक्सेन लिदा पनि केहि हुन्न भने डाक्टरसँग परामर्श लिन जरुरि छ
धेरै भारी रक्तस्राव हुन्छ र प्याड वा ट्याम्पन प्रत्येक १ घण्टा भन्दा छिटोमा फेरिहाल्नु पर्छ
महिनावारीलाई हामीले कसरी हेर्नपर्छ ?
महिनावारी महिलाको जीवनको एक प्राकृतिक र स्वस्थ हिस्सा हो । महिनावारीलाई व्यायाम गर्ने, रमाइलो गर्ने, र जीवनको आनन्द लिने तरिकाले हेर्नुहुँदैन। यदि तपाईंसँग महिनावारीको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने, डाक्टर, अभिभावक, स्वास्थ्य शिक्षक, स्कूल नर्स वा ठुलो दिदीलाई लाज नमानी, नहिच्किचाइ सोध्नुहोस्।
महिनावारी भनेको हामीले जसरी पनि जान्नै पर्ने विषय हो महिलाले मात्र हैन पुरुषले पनि निकै जान्न पर्ने विषय हो महिनावारी । हामीले महिनावारीको बारेमा जान्न सिकाउना कुनै लाज मान्नु हुन्न ।
Previous articleविश्व हिन्दु महासंघको कार्यालयमा तोडफोड र चोरी
Next articleपछिल्लो २४ घण्टामा ४९६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि